China Erasers fekitori uye vagadziri | SJJ
Erasers akakosha kune rako rekumira dhirowa kana penzura kesi, ino bvisa kutadza kwako uye zvese zvikanganiso iwe zvawakaita kusvika nhasi. Erasers akakosha tafura zvishongedzo zvevadzidzi uye vanogona kuishandisa pavanodhirowa, kuveza kana kugadzirisa chimwe chinhu.
Erasers akakosha kune rako rekumira dhirowa kana penzura kesi, ino bvisa kutadza kwako uye zvese zvikanganiso iwe zvawakaita kusvika nhasi. Erasers akakosha edesiki zvishongedzo zvevadzidzi uye vanogona kuishandisa pavanodhirowa, kuveza kana kugadzirisa chimwe chinhu.
Zvese zvedu zvekusimudzira erasersyevana inogadzirwa nezvinhu zvisina chepfu, saka haufanire kunetseka nezvevana kuti vapinde munyatwa nazvo. 100% isina-chepfu zvinhu, zvinoenderana EN71, CPSIA, ASTM, SVIRA bvunzo zviyero. Tsika dhizaini uye akasiyana marudzi epakeji aripo.
Inokodzera kumazera ese
Sangana nekusimba kwemazuva ese
Isiri-chepfu TPR zvinhu
Welcome OEM basa
Zvadaro: Ball Point Pens
tsika yakagadzira erasers
erasers netsika logo
erasers dzakadhindwa logo